Crypto: GNU / Linux ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာလုပ်ကြပါစို့။ Cryptocurrency နှင့်အတူလား။ | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အတော်ကြာ
နေ့စဉ်နှင့်အသည်းအသန်နေထိုင်သောငါတို့ရှိသမျှသည် GNU / Linux ကမ္ဘာနေ့စဉ်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်မကြာခဏအသုံးပြုသူများကဲ့သို့ အိုင်တီပညာရှင်များနှင့် / သို့မဟုတ် developer များ ဆက်စပ်မှု, ငါတို့အသိအမှတ်ပြုသည် ကြီးမားသောအရေးကြီးသောနှင့်မရှိမဖြစ် လက်ရှိကဘာလဲ GNU / Linux များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်၏ကမ္ဘာစူပါကွန်ပျူတာ၊ ဒေတာစင်တာများ (ဆာဗာများ)၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်အခြားတူညီသောသို့မဟုတ် ပို၍ အရေးကြီးသောကဏ္importantများတွင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ရန် GNU / Linux များ como operating system သာမန်နိုင်ငံသားများ၏ကွန်ပျူတာများကိုအိမ်တွင်ရောရုံး၌ပါပါ ၀ င်သည့် desktop ပတ်ဝန်းကျင်အများစုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်သွားရန်အဝေးကြီးရှိသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်နှင့် Open Source ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများ Cryptocurrencies တီထွင်မှုကတည်းကဒီနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြီးမားတဲ့စန်းခဲ့ကြပြီ Bitcoin။ ထို့ကြောင့်၊ GNU / Linux ၏မျက်နှာသာအတွက် Cryptocurrency စန်း၏အားသာချက်ကိုယူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
ဒီ post မှာ ငါတို့မှတ်ချက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး Cryptocurrencies အကြောင်းကိုနည်းပညာဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဘဏ္financialာရေးအသေးစိတ်ကိုသို့သော်ဤအကြောင်းအရာများကိုစိတ် ၀ င်စားသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် ယခင်ပို့စ်များ ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်၊ အဲဒီထဲမှာအောက်ပါအရာတွေဟာသက္ကရာဇ်စဉ်အလိုက်ဖော်ပြထားပါတယ် -
လက်တင်အမေရိကနှင့်စပိန် - Cryptocurrencies ရှိသော Blockchain စီမံကိန်းများ
Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် Cryptocurrencies: သူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ။
Blockchain, Cryptocurrencies နှင့်ဆက်သွယ်ရေး: 2020 များအတွက် Outlook
Crypto-မင်းမဲ့စရိုက်: အခမဲ့ဆော့ဝဲနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေး၊ အနာဂတ်လား။
ဟုတ်ကဲ့၊ သင်သည်၎င်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖတ်ပြီးဖြစ်သည် Crypto World နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏စာပေများ, သို့မဟုတ်သင်ဘာသာရပ်နှင့်သိကြ၏ FinTech နှင့် / သို့မဟုတ် Defy, သင်theကန်စင်စစ်စန်းနှင့်လက်ရှိအရေးပါမှုကိုငါသိ၏ Bitcoin လာမယ့်ရန်ရှိပါတယ် နည်းပညာ Blockchain ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်ခေတ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း၌တည်၏။
1 Crypto - လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့ကမ္ဘာ
1.1 Crypto World သည် GNU / Linux ကိုမည်သို့ပိုကြီးအောင်လုပ်နိုင်သနည်း။
Crypto - လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့ကမ္ဘာ
Crypto World သည် GNU / Linux ကိုမည်သို့ပိုကြီးအောင်လုပ်နိုင်သနည်း။
ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုရိုက်ထည့်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောတာကောင်းတယ်။ Cryptocurrencies သည်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဒ-န၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်အဖြစ်
"cryptocurrencies ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်များသည်များသောအားဖြင့်ပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့်ဆော့ဝဲလ်ပေါ်တွင်အမြဲတမ်းစာရင်းစစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအာမခံသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့နှင့်အတူ (သို့မဟုတ် Blockchain / Blockchain) တွင်လိမ်လည်လှည့်ဖျားသောလုပ်ဆောင်မှုများအားပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိစေရ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောစာရင်းကိုင်စာအုပ်တွင်ငွေပေးငွေယူများကိုအများပြည်သူသို့မဟုတ်အများပြည်သူပိုင်လမ်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးချိန်ခွင်လျှာများကိုအသုံးပြုသူများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသည့်လိပ်စာများနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။". Crypto-မင်းမဲ့စရိုက်: အခမဲ့ဆော့ဝဲနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေး၊ အနာဂတ်လား။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်လူအများစု၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်တိုင်းပြည်များ၏များပြားလှသောအသိုင်းအ ၀ ိုင်းများသည်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သူတို့၏ကြွယ်ဝမှု (ရန်ပုံငွေများ) နှင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပင်ရွှေ့ပြောင်းလာပါကယုတ္တိတန်သောနှုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ « National Fiat ငွေကြေး» ဒီ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောနည်းပညာများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ:
GNU / Linux သည်ဤလမ်းကြောင်းသို့သွားသည်မှာယုတ္တိတန်မည်မဟုတ်လော။
အကယ်စင်စစ်ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်လူအများစုတွင်ထိုနယ်ပယ်၏အသိပညာအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ အကြံဥာဏ် (သို့) အဆိုပြုချက်ရှိသည် နည်းပညာနှင့်ဘဏ္financeာရေးသို့သော်ဤ2ရိယာ ၂ ခုကိုအတိအကျပေါင်းစည်းလိုက်ခြင်းသည်တစ်ချိန်ချိန်ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင် (အသုံးပြုသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ထင်ရှားသောဖောင်ဒေးရှင်းများ) သည်ထူးဆန်းမည်မဟုတ်ပါ။ GNU / Linux များ, အ free software နှင့် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ရှိနိုင်တယ် တရားဝင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှု, သောအပေါငျးတို့သလိုအပ်သောအစီအမံများနှင့်ကိုက်ညီ လုံခြုံရေး၊ သီးသန့်တည်ရှိမှု၊ အမည်ဝှက်ခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုရှိခြင်း ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များကတောင်းဆိုသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် GNU / Linux World မှသက်ဆိုင်ရာလူများကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသိကြသည် ရစ်ချတ် Stallman အပြုသဘောအမြင်မရှိပါ သူတို့ရောနှောသောအခါ Cryptocurrencies + အစိုးရများ, ငါတို့ဆီသို့ ဦး တည်၎င်း၏အဆင်သင့်အနေအထားနှင့်ပတ်သက်။ ကောင်းစွာသိကြ၏ အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုနည်းပညာ ခေါ်ဆိုခ GNU အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, သောအသုံးပြုမှုကိုအားပေးသို့မဟုတ်အခွင့်ထူးပါဘူး အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ, ဒါပေမယ့်၏အသုံးပြုမှုကိုကြာရှည် ခေတ်နောက်ကျ, စီးပွားဖြစ်နှင့်ပိတ်ထားသော« Fiat ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့»။ ဒီနေရာမှာ GNU / Taler အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုပါ.
သို့သော်အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်၎င်းကိုယုံကြည်သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ရွာများအတွက်တရားဝင် cryptocurrency သုံးစွဲသူများ၊ ရပ်ရွာများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအကြားလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်၊
အလုပ်များ / အထောက်အကူများ / ၀ န်ဆောင်မှုများ / အပလီကေးရှင်းများအတွက်လျော်ကြေးငွေသို့မဟုတ်ပေးချေမှုများ။
GNU / Linux Distros များ၏မြှင့်တင်ရေးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်။
အကယ်စင်စစ် "ဒီသူ" နှင့် "ဘယ်လို"ဒါဟာဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ကြည့်ဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်နည်းပညာသည်၎င်းနှင့်အတူ၊ ဆက်လက်တိုးတက်နေ ဦး မည် နည်းပညာ Blockchain ကမ္ဘာ့ဘဏ္inာရေးလောကတွင်အောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌သာမက၊ များစွာသောသူများကိုပါတွေ့မြင်ရခြင်းသည်မထူးဆန်းပါ "အမျိုးသား cryptocurrencies" ဒါပေမယ့်လည်းတစ် ဦး ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာအတွက်တရားဝင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှု.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဘယ်လိုတတ်နိုင်သမျှ «El Mundo Cripto» ကြီးပွားအောင်ကူညီပါ «Mundo GNU/Linux» အမြတ်ထုတ်ရန်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေရာများတွင်၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » Crypto: GNU / Linux ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာတည်ဆောက်ကြပါစို့။ Cryptocurrency နဲ့လား?
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ အကယ်၍ ၎င်းတွင်ငွေပေးငွေယူမှုအတွက်တာဝန်ရှိသူများ၏အမည်ဝှက်မှုကိုခွင့်ပြုမည့်နည်းပညာဆိုင်ရာယန္တရားတစ်ခုခုရှိခဲ့လျှင်၊ cryptocurrency ကိုသာကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထောက်ခံလိမ့်မည်။ အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးလေးသောတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုအချို့။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်အမည်ဝှက်ဆုံးရှုံးမှုသည်အခြားအခြေအနေများတွင်သာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး (ထို့ကြောင့်ထိုယန္တရားသည်တရားဝင်အသုံးပြုသူများ၏အမည်ဝှက်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်အလုပ်မလုပ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်သည်။ နည်းပညာအဆင့်တွင်ဤသို့သောအရာမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူများအရ၎င်းကိုကျွန်ုပ်လက်ခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
၁၀၀% အမည်မသိဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဟာငါဘယ်တော့မှမထောက်ပံ့ဘူး။ ရာဇဝတ်ကောင်များကိုငွေပြားပေါ်တွင်အမှုဆောင်ခြင်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်သည့်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်အနိမ့်ဆုံးစွန့်စားမှုနှင့်အတူအဆိုးရွားဆုံးသောအပြုအမူများကိုကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုထောက်ပြ။ ၎င်းသည် "သူတို့သည် cryptocurrencies နှင့်သို့မဟုတ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်" ဟုမကြာခဏဆိုသော်လည်း၎င်းသည်မှားယွင်းသောနှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခု၏မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာအခြေအနေနှစ်ခုကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်သောကြောင့်၊ တူညီသည်၊ အခြေအနေတွေကလုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်။ ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လမ်းပေါ်တွင်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ အမျိုးမျိုးသောခြေရာများနှင့်သဲလွန်စများကိုစွန့်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ ရဲများတွင်၎င်းတို့ထံရောက်ရှိရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည် (ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များကပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရသည်) ။ ဆန့်ကျင်စွာပင်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကြွင်းမဲ့အမည်ဝှက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေရန်မှာမဖြစ်နိုင်သလောက်ဥပဒေအင်အားကိုလက်နှင့်ချည်ထားခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင်တရား ၀ င်တရားမ ၀ င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကျူးလွန်ခံရသူများ (ကလေးများ) နှင့်၎င်းတို့ခံစားခဲ့ရသောညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း (သူတို့ပင်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း) အားလုံးကိုတရားမျှတမှုမရှိဘဲထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကလည်းတန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ကွန်ယက်တွေမှာအမည်ဝှက်တာမရှိဘူး၊ အစိုးရတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိနိုင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေရဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ် (တစ်ခါတစ်ရံ * အလွန်အန္တရာယ်များတယ်) ရုရှားလို (သို့) တရုတ်လိုအာဏာရှင်စနစ်တွေ (အီးယူ၊ အမေရိကန်လိုမျိုးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတောင်အဆင်မပြေဘူး) ။ သို့သော်အနည်းဆုံးတော့ထိုအမှုများတွင်ဒီမိုကရေစီအရိပ်အမြွက်ရှိနေသရွေ့နိုင်ငံသားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကျင့် သုံး၍ ထိုကဲ့သို့သောဆောင်ရွက်မှုများကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ရန်နေရာရှိပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သာမန်လူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကွန်ယက်များမှပြန်ပေးဆွဲခံရသည့်ကလေးများကိုသွားကယ်ဆယ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့၏အခြေအနေမှာအလွန်အမင်းပြင်းထန်သည်။
Yoshiki မင်္ဂလာပါ။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောထည့်ဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိနည်းပညာနှင့် 100% အမည်ဝှက်ထားနိုင်ပါကအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသောကွန်ယက်ကဒ် (ကြိုးမဲ့) ကိုအသုံးပြုသည် (ခိုးယူခြင်းနှင့်ကင်မရာတွင်ခိုးယူခြင်းမရှိသော)၊ « aircrack-ng ( စာကြည့်တိုက်များ»»အခြားသူတစ် ဦး ၏ကွန်ယက် (WPA2 ဖြစ်နိုင်သည်) ကိုချိတ်ဆက်ရန် monero (ပမာဏသည် blockchain ပေါ်ရှိပမာဏကိုခြေရာခံမည်မဟုတ်) နှင့် Tor ကွန်ယက် (IP လိပ်စာနှင့်တရားခံကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲစေရန်) ) ။
José juan အားပြန်ပြောပါ
nemecis ၁၀၀၀ ဟုသူကပြောသည်
Monero ကဲ့သို့သော 100% အမည်မသိလျှို့ဝှက် cryptos များကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ခြေရာခံငွေကြေး (bitcoin) ကိုအသုံးပြုခြင်းပြproblemနာကိုမကြာမီသို့မဟုတ်နောက်ကျမှဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ သင်သည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်သင်၏ဘဏ္doorာရေးအတွက်သင်၏ငွေကြေးလိုအပ်သောကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင်၏တံခါးကိုဖြိုဖျက်ရန်မလိုချင်ပါ။ သင့်ထံမှခိုးယူခြင်း၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းတို့သည် crypto ကိုလက်ခံပြီးဖြစ်သောအချို့စီမံကိန်းများ၏လှူဒါန်းမှုအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်လှူဒါန်းနိုင်သည့်အခါ (ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ)
https://guix.gnu.org/es/donate/ - (monero ကိုမသုံးသော်လည်းလှည့်ကွက်များဖြင့်အမည်မဖော်လိုသော) နှင့် https://linuxmint.com/donors.php - (ဒီတစ်ခုက monero ကိုသုံးတယ်။ ငါအများဆုံးလှူတယ်။ )
ဆိုက်ဘာပန့်ခ်နှင့် Crypto မင်းမဲ့စရိုက်
မင်္ဂလာပါ Nemecis1000 ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Guix စီမံကိန်းအကြောင်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ၊ သင်ရပ်ရွာသို့သင်ရံပုံငွေလှူဒါန်းနိုင်သည့်အခါတိုင်း ၀ မ်းသာသည်။
ရရှိနိုင်သည့်ပထမ beta LibreOffice 7.1
Salesforce သည် Slack ကိုဝယ်ယူရန်အတွက်တိကျသောသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည်